Prodcut nzukọ ogbako - Yuyao Jera Line Dabara Adaba Co., Ltd.
Jera fiber nwere mgbakọ 3 na nzukọ ọmụmụ ihe. Imirikiti ngwaahịa anyị na-eweta nwere 4 ma ọ bụ karịa akụkụ ahụ mapụtara. A Emechara ngwaahịa kwesịrị ka a kpọkọta na mmepụta akara, na mgbe ahụ na-eme mbukota. Anyị na-eji teknụzụ nke usoro ebufe iji mee ngwa ngwa nzukọ anyị
Na nzukọ ogbako anyị na-ezukọ:
-FTTH igbe na FTTH splice mmechi
-FTTH eriri arịlị na nkwusioru nkwusioru
- dobe mwekota waya
-Electrical cable arịlịka mwekota
-Low voltaji USB nkwusioru mwekota
-Insulation ịkpọpu akụkụ njikọ
-Shear isi eriri lugs na njikọta
Anyị nwere usoro 7 iji wee nwee usoro mgbakọ dị irè:
Nhazi nke usoro ogbako ahụ
O doro anya na nkewa nke mgbakọ
Zipu ogbako a
Tinye mgbakọta ahụ n'ọrụ
Mkparịta ụka banyere ụzọ mmezi izugbe
Nhazi nke ọnọdụ achọrọ
Mmejuputa iwu amalite
Jera fiber na-eji usoro mbufe mgbe anyị na-achịkọta ngwongwo. Usoro a nwere ike melite nrụpụta ọrụ ma chekwaa nrụpụta nrụpụta ụlọ ọrụ. O nwekwara ike ịchekwa ọnụọgụ ndị na-arụpụta ihe ruo n'ókè ụfọdụ ma ghọta ogo ụfọdụ nke imepụta akpaaka.
Ebumnuche anyị bụ rụpụta ma nyefee ndị ahịa anyị ngwaahịa zuru ezu na nke a pụrụ ịdabere na ya na nwube nke netwọkụ mgbasa ozi na sistemụ ike. Biko nweere onwe gị ịkpọtụrụ anyị maka inwekwu nkwado, nwee olileanya na anyị nwere ike iwulite mmekọrịta ntụkwasị obi, ogologo oge.